Imishini yokusebenza kwempahla nge-umthwalo iboniswa kabanzi. Ingxenye, efaka amalothi amancane ngesistimu yokulawula ehlelekile, iyona ethembisayo kakhulu futhi ekhangayo. Imishini enjalo isetshenziswa amabhizinisi amakhulu akhonza izindawo ezinkulu zokugcina kanye nezitolo ezincane. Enye yezinketho ze-ergonomic ngaphakathi kwalesi sigaba yi-Rokhlya trolley, ehlanganisa izinzuzo zamakhraneshi zendabuko kanye nokuqondiswa kwamabhawundlu ohlangene.
Umklamo we "Rokhli"
Lo mdwebo umelela uchungechunge lwamatrollethi ahlangene angakwazi ukubhekana nesisindo sezinhlobo ezahlukene, uma amandla okuphatha evumela. Isisekelo sobuchwepheshe sakhiwa yinhlanganisela yesibambo esikhulu kanye namafoloko, okufakwa kuyo impahla. Njengomthetho, amateyili we-hydraulic "Rokhlya" afakwe uhlelo lokushayela, futhi ukufakwa kokuphakamisa kufakwe kwisisekelo. Amamodeli wendabuko, noma kunjalo, awunawo izindlela zokuphakamisa, okuvimbela ububanzi besicelo sabo. Ukuba khona kwe-lift kuvumela, ngaphandle kokusetshenziswa kwamandla angaphandle, ukubeka umthwalo ngamanqanaba okuphakama ahlukene ebangeni okushiwo yi-design equipment.
Kuye ngokuklama, ukusebenza kwe-trolley kunqunywe. Amanye amamodeli akwazi ukuhamba azungeze igaraji, kanti ezinye zenzelwe ngqo umkhiqizo wokulayisha imisebenzi. Kodwa-ke, ukuba khona kwenqubo yokuphakamisa kunemiphumela yokungaphumeleli. Ukuba khona kwayo kubangelwa ukulungiswa njalo kwezinto zokufakelwa kwamathuluzi, lapho okwakhiwa kokubili kwezinto ze-piston kanye nesistimu yokushayela kungahle kubuyekezwe.
Ukwabiwa okuyinhloko kudlula ngohlobo lokusetshenziswa kwesistimu nokulawula. Yiqiniso, umehluko kule nqubomgomo futhi inquma umehluko kuzici zobuchwepheshe nokusebenza. Ngakho-ke, i-trolley ye-hydraulic manual iyindlela elula futhi ejwayelekile. Lokhu kuyindlela okungekho isiteji eshukumayo eshukumayo futhi ukunyakaza kwenziwa ngokuqondile ngabasebenzi abasebenza. Kodwa lokhu akusho ukuthi amaloli alolu hlobo awanqatshelwe indlela yokuphakamisa.
Ukhetho lwesibili seluvele lukhona iloli kagesi elizimele, elinomthamo ophezulu wokulayisha futhi aludingi uxhumano lwamandla omzimba ukuhambisa isiteji. Ngokuvamile izimoto ezinjalo zinezinketho ezisizayo. Lokhu kungaba, ngokwesibonelo, i-trolley yamathuluzi anezinsimbi ezikuvumela ukuba unqume isisindo somthwalo endaweni futhi ubhale amanani kumadokhumenti angaphezulu.
Kukhona imingcele emithathu eyinhloko enquma amandla okusebenza amabhokisi alolu hlobo. Owokuqala yiwona ophethe amandla. Izinga lokuqala lamamodeli likuvumela ukuthi usebenze ngemithwalo enesisindo esingamathani ayi-1. Ukuphakama kungamathani ayi-3, uma sikhuluma ngokuguqulwa kwezincwadi. Amakolishi asebenza ngokuzenzekelayo "Rokhlya" angasetshenziswa nomkhiqizo onamandla kakhulu - isilinganiso samathani ayi-5-7. Kusukela ekubukeni kokusebenza kahle nokusebenza kahle kwenqubo yokuhambisa impahla, ipharamitha efana nobude be-pitchfork, ehluka kusuka ku-80 kuya ku-300 cm, kubalulekile. Ziningi, umthamo omkhulu wezimpahla ezingasetshenziswa yi-carrier carrier. Esinye isici esibalulekile senza amathuba okuthi "Rokhli" athathe imithwalo. Ukuphakama kokukhethwa kuyahlukahluka ngokwesilinganiso kusuka ku-3 ukuya ku-8 cm.
Imali engakanani iRokhlya hydraulic carts ibiza?
Umklamo olungiselelwe unqume izindleko eziphansi ze "Rokhli" esizindeni esiphezulu semishini yokugcina impahla yokuthutha impahla. Amamodeli angabizi kakhulu okusetshenziswa kwemishini enjalo ayalinganiselwa kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-10-12. Lezi zinguquko ngepulatifomu elula, kufaka phakathi amafolda amafushane kanye nedivaysi evamile yendlela yokushayela. Kusukela ekubukeni kokusebenzisa esitolo esivamile ngokugeleza okuncane kwempahla - lena yiyona efanele kakhulu "Rohlja". I-trolley yama-Hydraulic, intengo yayo ehlukahluka ku-15-20,000, inamaforomo amakhulu kuze kube ngu-200 cm, kanye nenqubo yokuphakamisa nokwehla.
Kuze kube yamuva, abakhiqizi baseShayina nabaseJapane babhekwa njengabaholi ekukhiqizeni amaloli okugcina, ama-stackers namashikashiki. Kodwa-ke, amamodeli asebenzayo, amanani aphezulu futhi angabizi kakhulu ayaphuma ngaphansi kwemikhiqizo yezinkampani zaseYurophu. Ngokuyinhloko, uTruth umbusi uqukethe i- "Rokhli" eyenziwe ngama-alloys high-strength, emelana nemithonya yemvelo nengaphakathi. Ukuze usebenze nge-pallet kanye nezimpahla, uzame ukuhlinzeka ngamatokhi aphuma ku-Eurolifter. Lo mkhiqizo unikezwa ukuvikelwa kokulwa nokubhujiswa, izimbambo ze-ergonomic kanye nezinqubo zokuphakamisa okuhlala njalo. Ikakhulukazi yezimpahla ezinzima, izinhlobo ze-Grost GT zenzelwe. Ukuguqulwa kwalo mndeni kubhekwa ukukhwabanisa okunzima, ipulatifomu ethembekile kanye nesistimu yokulawula i-ergonomic.
Indlela yokukhetha imodeli engcono kakhulu?
Ukuthembela ekukhethweni okulandelayo kulandela izici eziyinhloko zamandla okuphatha, kodwa ungakhohlwa izimo zokusebenzisa imishini. Ngokuvamile kuyadingeka ukukhetha phakathi kwamathuba okusebenza kwesikhathi esisodwa sokuthunyelwa kwempahla enkulu kanye nokuhlanganiswa kwe "Rokhli". Njengomkhuba wokubonisa, izakhiwo ezincane ezitolo zithandekayo ukuthenga amamodeli ngefologi emifushane, kodwa amandla amaningi esistimu yokuphakamisa kanye nokuba khona kokukhethwa okungeziwe. Isibonelo, i-trolley yama-hydraulic enezinsimbi ngeke ivumeleke ukuhamba kuphela, kodwa futhi ikhombisa imithwalo endaweni elinganiselwe. Ngakolunye uhlangothi, ukuze kube ne-hangar enkulu yokugcinwa kwempahla, kungcono ukukhetha i-bogie encane nenkulu ezosingatha ngokucophelela imiqulu emikhulu esikhathini esifushane.
I-trolley elula, kulula ukuyikhonza. Kumele kuqashelwe ukuthi lo mbono we "Rokhli" ubonisa uhlu oluncane lwemisebenzi nokugcinwa kwezobuchwepheshe zesimo salo. Okokuqala, lokhu kusetshenziselwa ukugcoba okuvamile kwezingxenye zomshini, ukuhlola iqembu lesondo kanye namajoyina ezinxenyeni zokusebenza. Ukulungiswa okuqondile kwamatrolliyamu okunciphisa umzimba kunciphisa ukushintshwa kwezakhi noma yonke imishini, kodwa isidingo sokwenza lezo zenzo akuvamile. Ngokuvamile kunalokho, abasebenzisi babhekene nomonakalo kumavili e-polyurethane ashintshwe kalula.
Ngenxa yobukhulu be-compact kanye ne-platform yokwenza umsebenzi osebenzayo, i- "Rokhlya" izosiza ngisho nasezimo eziseduze ukubhekana ngokuphumelelayo nezinselele zanoma iyiphi inkimbinkimbi. Ukuze inqubo yokusebenza nomkhiqizo ihlelwe kangcono ngangokunokwenzeka, i-trolley yamathuluzi yamandla kufanele ivumelane nezici hhayi kuphela kwimithwalo yempahla ngokwayo, kodwa futhi nemibandela yesicelo. Kumele kubalwe ekuqaleni, ngokusho ukuthi yimiphi imithetho ezohlelwa uhlelo lokuhamba kwempahla. Izinzuzo zala makhukhi zihlanganisa i-ergonomics nokutholakala emsebenzini. Akudingekile ukuba nemfundo ekhethekile yokuphathwa kwemishini, noma kunjalo, kufanele kucatshangelwe ukuthi opharetha kumele abe ngomumo wemithwalo yamandla. Lokhu kusebenza kumamodeli angasese, futhi amaloli kagesi asebenza ngokuvumelana nomthwalo wokuzikhandla.
Sibutsetelo sika Multivark Redmond RMC-M23
I-Antistatic strap strap: ukuphepha kwikhompyutha ngesikhathi sokulungisa
Wax Cold ezandla: kanjani ukuyisebenzisa?
Gorbenko Aleksandr Nikolaevich: Biography, izithombe, isikhundla, oxhumana nabo